သတင်းများ - Foshan HaiRan Waterjet Cutting Technologies Co. , Ltd
Check valve Body
အဆို့ရှင်ပြုပြင်ရေးကိရိယာကိုဖွင့် / ပိတ်ပါ
Water Jet ပွန်းပဲ့သော nozzles
Water Jet စုဆောင်းခြင်း Attenuator
Water Jet Intensifier
Water Jet Nozzle ခန္ဓာကိုယ်
Water Switch Valve ကိုယ်ထည်
အကြီးအကဲ Assy ဖြတ်တောက် Waterjet
နေအိမ် » သတင်းများ
Dardi စတိုင်အဘို့သင့်လျော်သော CNC 1.2L ရေဂျက်စုဆောင်းခြင်း Attenuator
CNC5ဝင်ရိုးတန်း 60000 Psi ပလပ်စတစ်မြင့်မားသောဖိအား Waterjet ဖြတ်တောက်ခြင်းစက် Intensifier Pump Spare Parts Accumulator Attenuator
Flow Style အတွက်သင့်လျော်သောပတ္တမြား Orifice စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သူ Waterjet ခေါင်းအပိုပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ခြင်း
Waterjet Cutting Head အပိုပစ္စည်းများ Water Jet-Only Orifice
ဒီဇိုင်းတိုင်းအတွက်သင့်တော်သော Ruby Orifice ဖြတ်တောက်သည့်ရေဂျက်လေယာဉ်
မြင့်မားသောဖိအားရေဂျက်ဖြတ်တောက်ခြင်းခေါင်း HBT Water Jet ပွန်းစားသော nozzles
Foshan Hairan ကုမ္ပဏီမှဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ် nozzle body
By admin on 2020-09-03 09:09:20
ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းအားလုံး၏အားထုတ်မှုဖြင့်, KMT H20 အတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်ပါပြီ, သော nozzle ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှတင်သွင်းသောသဘာဝစိန်ချစ်ပ်များကိုအသုံးပြုသည်, double-entry ကိုသဲ tungsten သံမဏိသဲလမ်းညွှန်ပြွန်, nozzle နှင့် orifice ကိုလုံး ၀ အာရုံစူးစိုက်မှုသေချာစေရန်အတွက်ပေါင်းစပ်ထားသည်, နှင့်တင်သွင်းသောသဘာဝစိန်များ၏သက်တမ်းသည်ရောက်ရှိနိုင်သည် 500-900 ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်မှာနာရီ. စကားမစပ်, အောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်, ထိုကဲ့သို့သော Turbo Generator ကိုညီလာခံအဖြစ်, Intensifier, Attenuator ညီလာခံ, အပြည့်အဝရေသာဖြတ်တောက်ခြင်းခေါင်း, High- ဖိအား Cylinder, Dynamic Seal Assembly ကိုပြုပြင်ရေးကိရိယာ, 87ထိုင်ခုံတံဆိပ်ခတ် k, တိုက်ရိုက် drive ကိုစုပ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ, Flow အတွက် Cutter Head Set,P4 Flow အတွက်ခေါင်းဖြတ်ခြင်း, ဖိအားမြင့် Seal Group နှင့်စသည်. သင်လိုအပ်လျှင်…
By admin on 2020-08-06 17:08:35
[ဗီဒီယိုအကျယ် ="640" အမြင့် ="368" mp4 ="https://www.hairanwaterjet.com/wp-content/uploads/2020/08/1596707926-video.mp4"][/ဗွီဒီယို] Foshan Hairan စက်ပစ္စည်းနှင့်စက်ပစ္စည်းများ, Ltd. ရေစုပ်စက်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အလွန်မြင့်မားသောဖိအားရေဂျက်လေယာဉ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏သုတေသနကိုအထူးပြုသည်. အမျိုးမျိုးသောဌာနများနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်အားထုတ်မှုမှတဆင့်, နောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့တယ်. ဒါကပိုကောင်းတဲ့အစဖြစ်တယ်. သြဂုတ်လ ၁ ရက်နံနက်သည်ငါတို့ရွှေ့သောနေ့ဖြစ်သည်. အလွန်အားလပ်ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ကတည်းက, ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ပြည်တွင်းရောင်းအားကို ဦး ဆောင်ရုံသာမကပြည်ပတွင်ကောင်းမွန်သောစျေးကွက်နှင့်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်. မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, ၎င်းသည်ဖိအားမြင့်သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများကဲ့သို့သောနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင်အဆက်အသွယ်များကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်, ခရီးဆောင်ရေဂျက်လေယာဉ်, နှင့်ကားအတွင်းပိုင်း ABB ဖြတ်တောက်ခြင်း။ …
By admin on 2020-07-21 16:07:01
၎င်း၏ကျယ်ပြန့်လျှောက်လွှာများနှင့်ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြောင့်, waterjet ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲအဓိကစက်ကိရိယာတန်ဆာပလာနည်းပညာဖြစ်လာသည်. In 1950, ဒေါက်တာ. Norman Franz သည် Ultra-high pressure waterjet ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုပထမဆုံးလေ့လာသူဖြစ်သည်, နှင့် waterjet ၏ဖခင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်. In 1979, ဒေါက်တာ. မိုဟာမက် hashish စီးဆင်းမှုဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာရေကိုသဲချဲလေ့လာစတင်ခဲ့သည်. သူ့ကိုဂျက်လေယာဉ် ချ၍ ဖခင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်. In 1980, Sjet waterjet ကိုပထမ ဦး ဆုံးသတ္တုဖြတ်တောက်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်, ဖန်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ. In 1983, ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးစီးပွားဖြစ်သဲရေဂျက်လေယာဉ်မှထွက်လာသည် 1999, ရွှေမြှားရေဂျက်လေယာဉ်ကိုပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဈေးကွက်များသို့အပြည့်အဝမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်. ယခုအထိ, ရေနွေးငွေ့စက်ကျယ်ပြန့်ခဲ့ ...
By admin on 2020-07-07 09:07:17
Water cutting, also known as waterjet, isahigh-pressure water jet cutting technology, which isamachine that uses high-pressure water jet cutting. Under the control of the computer, the workpiece can be sculpted arbitrarily, and it is little affected by the texture of the material. Due to the high stability of the waterjet cutting process, the cut of the cut slate is flat. Xie Li CNC is deeply optimizing the new EtherCAT bus AC five-axis water cutting system. Nowadays, many industry leading companies have adopted it and used it in many industries such as rock slab processing. https://www.facebook.com/forevil.forevil
By admin on 2020-01-15 15:01:15
Waterjet သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်မကြာခဏအသုံးပြုသောကိရိယာဖြစ်သည်. အဆိုပါ waterjet သုံးပြီးပြီးနောက်, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးသည်အကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိနိုင်သည်. သို့သော်, အဆိုပါလိုအပ်ချက်တင်းကျပ်သောလည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်ပါသည်. နောက်ထပ် waterjet အတွက်သဲ nozzle ၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုးတက်စေရန်, တံဆိပ်ခတ်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်. နေသမျှကာလပတ်လုံးသင် waterjet ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဖောင်းကြွအစိတ်အပိုင်းများကိုထိရန်သင်နှစ် ဦး စလုံးလက်ကိုသုံးနေသမျှကာလပတ်လုံး, ဒါကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်. ယေဘူယျအားဖြင့်, မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်အတူအဆုံးအပေါ်တံဆိပ်ခတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမလုံလောက်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ waterjet ၏အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်း, ပိုက်လိုင်းချိတ်ဆက်မှုကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်. ရေယိုစိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ကိုကာကွယ်ရန်, အဆိုပါမှာချည် ...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Waterjet ဆက်စပ်ပစ္စည်းပေးသွင်း
By admin on 2020-01-15 14:01:12
Waterjet application များသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့လာနေသည်. ရေဂျက်လေယာဉ်ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုမှု၏အကုန်အကျအများဆုံးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် waterjet ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်. အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ကတော့သင့်အတွက် waterjet ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်. ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောထုတ်လုပ်သူအချို့ကိုရွေးချယ်ရမည်. ရေစိုခံပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိပါသည်, သောငါတို့စက်များ၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်. waterjet ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးသည်ထုတ်လုပ်သူ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်, ဒါပေမယ့်ကောင်းတဲ့အကြွေးစခန်းတစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး, ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမှန်တကယ်အားပြင်းထန်စွာအားကိုးရမည်ဖြစ်သည်. ပရော်ဖက်ရှင်နယ် waterjet ဆက်စပ်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်, Hairan waterjet ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်လူသိများသောနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့်နက်ရှိုင်းစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်. ကျနော်တို့ကအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာပါပြီ. The …
လိပ်စာ: No.D18 Block D Oupu သံမဏိစျေးကွက်,Xihai စက်မှုဇုန်,Lecong မြို့,Shunde ခရိုင် Foshan City
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်ယူသူများအားအရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးရန်ကြိုးစားသည်. သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံပါ,နမူနာ & ကိုးကား,ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
Waterjet အပိုပစ္စည်းများ,Headjet ဖြတ်တောက်ရေ Waterjet,မြင့်မားသောဖိအား WaterJet Pump Intensifier,Waterjet ပွန်းစား nozzles,ရေဂျက်စုဆောင်းခြင်း,Waterjet အစိတ်အပိုင်းများ Orifice © 2022 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ